Naya course » डम्पीङ साईड होईन, प्रशोधन केन्द्र हो : कोहलपुर नगरपालिका डम्पीङ साईड होईन, प्रशोधन केन्द्र हो : कोहलपुर नगरपालिका – Naya course
डम्पीङ साईड होईन, प्रशोधन केन्द्र हो : कोहलपुर नगरपालिका
फोहरबाट मोहर बन्छ : प्रमुख रावत
कोहलपुर/ कोहलपुर नगरपालिका वडा नं ९ मा डम्पीङ साईड नभएर प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिन लागेको कोहलपुर नगरपालिकाले बताएको छ । कोहलपुर नगरपालिकाका विपत बिज्ञ गोबिन्द्र वाग्लेले उक्त स्थानमा फोहर थुपार्ने नभएर घर– घरबाट निस्कने फोहर बिभिन्न कामका लागि पुनः उपयोग गर्ने गरी प्रशोधन गरिने नयाँ कोर्सलाई बताए । उनले कुहिने फोहर बाट कम्पोष्ट मल, बायो ग्यास, नकुहिने प्लास्टीक र धातुलाई पुनः प्रोयोग गर्न प्रशोधन गरिने जानकारी दिए । उनले उक्त प्रशोधन उद्योगले कोहलपुर ९ मा रोजगार श्रृजना हुनुका साथै बिकासको एक ईटा थापिने दाबि गरे । प्रशोधन उद्योगले रोजगार श्रृजना हुने वाग्लेको भनाई छ ।
यस्तो बन्दै छ प्रशोधन केन्द्र
बिज्ञ वाग्लेले नेपालको भक्तपुर जिल्लामा यस प्रकारको फोरह व्यवस्थापन भएको बताउँदै फोहरको प्रकृति अनुसार स्थानीयले समेत केही पैसा पाउने बताए । उक्त उद्योग बाट कुनै पनि प्रकारको दुगन्ध बाहीर नजाने उनको भनाई छ ।
कोहलपुर नगरपालिका वडा नं ९ मा जटायु रि–साईकिलर्स प्रा.ली. र कोहलपुर नगरपालिकाको साझेदारीमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिदै छ ।
उक्त कम्पनी सञ्चालक हरी केसीले घर–घरमा रहेका कुहिने र नहुहीने बस्तुहरु बर्गिकरण गरेर प्रशोधन केन्द्र सम्म लगिने बताए । प्रशोधन केन्द्रमा प्लाष्किलाई प्रशोधन गरिने , धातुताई पनि पुनः प्रयोगका लागि पठाईने र कुहिने फोहरबाट प्राङगारीक मल र बायो ग्याँस उत्पादन गरिने जानकारी दिए । ३ बिगाह क्षेत्रफलमा कोहलपुर नगरपालिकाको साझेदारीमा गार्डेन सहितको प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिने बताए । उक्त उद्योग बाट कुनै प्रकारको दुगन्ध बाहिर नजाने केसीको दाबि छ ।
उनले पुर्ण रुपमा उपकरण जडान नहुदा सम्म कुनै पनि प्रकारका बस्तुहरु उक्त स्थानमा नलगिने बताएका छन । प्रशोधन उद्योग तयार भएपछि मात्रै घरमा उल्पादन हुने फोहर उक्त स्थानमा लगिने उनको भनाई छ । उनले उद्योग र हस्पिटलबाट निष्कने कुनै बस्तु र फोहर भने आफुहरुले उक्त स्थानमा नलिने बताएका छन । उनले भने हप्पिटल र उद्योगहरु बाट निस्कने बस्तुहरु हामिले उठाउदैनौ ।
केसीले आफुले प्रशोधन केन्द्र नजिक आफुहरुको प्लास्टिक उद्योग रहेको बताउदै प्लास्टिकहरु उक्त उद्योग बाट पुनः प्रयोग गरिने दाबि गरे । केसीका अनुसार केही स्थानीयले उक्त स्थानमा डम्पिङ साईड बनाउन लागेको हो की भन्ने आंसका रहेको बताउदै डम्पीङ साईड नभएर प्रशोधन केन्द्र स्थपना गर्न लागिएको बताए । उनले उक्त प्रशोधन केन्द्रमा आवश्यक हुने रोजगारीमा स्थानीय बासीन्दा राखिने बताए । उनले एक घर एक रोजगारको निती अन्र्तगत क्रमश सबैलाई रोजगर दिईने बताए ।
कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख लूट बहादुर रावतले फोहर बाट मोहर कमाउने उदेश्यका साथ निजी कम्पनी संगको साझेदारमा फोहर मैला प्रशोधन केन्द्र स्थपना गर्न लागेको बताए । उनले फोहर मैला व्यवस्थानका क्रममा स्थानीय कम्पनीसंग साझेदार गर्दा सहज हुने र दायित्व बोध पनि हुने ठानेर प्रतिस्प्रर्धात्मक बिधीद्धारा स्थानीय कम्पनीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडी बढाईएको बताएका छन । उनले ६ ओटा कम्पनीले प्रस्तावना पेश गरेकोमा जटायु रि–साईकिलर्स प्रा.ली. को प्रस्तावन पास भएको बताएका छन ।
उनले नगर पालिकाले केही रकम लगानी गरेको भएपनि प्रशोधन कार्य सुरु भएसंगै त्यस बाट प्राप्त हुने मुनाफको २५ प्रतिशत रकम कोहलपुर नगर पालिकालाई प्राप्त हुने गरी १५ बर्षका लागि सम्झौता गरिएको नयाँ कोर्सलाई बताए । उनले उक्त मुनाफा रकम बातावरण र पर्यावरण संरक्षणमा खर्च गरिने दाबी गरेका छन ।